सामूहिक ईज्जतको प्रसड्ड – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ बैशाख ११, बिहीबार ०२:०५ गते
मान्छेको दुनियाँमा मात्रै इज्जत र बेइज्जतको चर्चा हुन्छ । प्राणी जगत्मा मान्छेलाई छाडेर अरुका हकमा इज्जत, बेइज्जतको कुनै अस्तित्व छैन । मान्छे कपडा लाउँछ, अरु प्राणी कपडा लाउँदैनन् । बाघ, भालु, गैँडा, हात्ती, बाँदर, गाई, भैँसी, सुँगुर, बंगुर सबै नांगै छन् । यिनीहरु कपडा लाउँदैनन् र यिनको बेइज्जत हुँदैन । तर, मान्छेले लामो समयअघिदेखि कपडा लाउँदै आएको छ । जतिसुकै गर्मी किन नहोस्, पातलै भए पनि मान्छेले आजसम्म कपडा लाएकै छ, लाउन छाडेको छैन । सबैले कपडा लाउन छाडे भने त्यतिबेला मान्छेको समुदायबाट पनि इज्जत र बेइज्जतको प्रसंग हट्छ । कसैले लाउने कसैले नलाउने गर्दा नलाउनेको इज्जत जाला र लाउनेको इज्जत जोगिएला । तर, इज्जतको परिभाषा नांगो हुनु र नहुनुमा मात्रै सीमित छैन । मान्छे कहलिनुमा मान्छेमा हुनुपर्ने आधारभूत विशेषता रहुन्जेल मान्छे भनिन्छ र त्योभन्दा दायाँबायाँ गएको खण्डमा मान्छे कहलिँदैन ।
मान्छेका थुप्रैथुप्रै विशेषतामध्ये एउटा हो, इमानदार हुनु । मान्छेले चोर्दैन, यदि कसैले चोर्छ भने उसलाई चोर भनिन्छ तर मान्छे भनिँदैन, अर्थात् चोर मान्छे भनिँदैन । वेश्यावृत्ति अपराध हो । वेश्यावृत्तिमा संलग्न हुनेलाई सिर्फ वेश्या भनिन्छ, वेश्या महिला भनिँदैन । यसरी आफ्नो परिचय बदल्दा नकारात्मक परिणाम निस्किन्छ र त्यसले समाजलाई नकारात्मक प्रभाव दिन्छ भने त्यो कर्ताको बेइज्जत हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिको इज्जत गएको भनिन्छ । इज्जत प्राप्त हुने र नहुने विषय एक व्यक्ति आफूमा मात्रै सीमित हुँदैन । इज्जत अरुका कारणले पनि प्राप्त हुने र गुम्ने हुन्छ । मानसिक अवस्था ठीक नभएको वा भएकै कुनै एक नेपाली महिला नारायणगढ बजारमा वा काठमाडौँ सहरमा सर्वांग नांगो हिँडिन् भने त्यतिबेला नारायणगढका मान्छेहरुको सामूहिक बेइज्जत हुन्छ र काठमाडौँका मान्छेहरुको पनि इज्जत बाँकी रहँदैन । तिनले कपडा लाएकै भए पनि इज्जत बाँकी रहँदैन । एउटा कोणबाट हेर्दा नारायणगढ र काठमाडौँ सहरका मान्छेमा मानवता गुम्दाको कारण एउटी महिला नांगै हिँड्दा समेत कसैले कपडाले शरीर नछोपिदिएको आरोप लागेर सामूहिक इज्जत जान्छ भने कुनै विदेशीले त्यो नांगो शरीरको फोटो खिचेर संसारभरि प्रदर्शन गरिदिए भने नारायणगढ र काठमाडौँवासीको मात्रै होइन, पूरै नेपालीको इज्जत गुम्छ । किनकि, ती नांगो शरीरवाला महिला नेपाली हुन् ।
हालै बंगलादेशमा भएको क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीहरुले राम्रो खेल खेल्दा दुनियाँले प्रशंसा गरे । सम्पूर्ण नेपालीको इज्जत बढ्यो । सामूहिक इज्जत र बेइज्जतका उदाहरणहरु अरु पनि छन् । सन् १९५३ मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको ८८४८ मिटर अग्लो चुचुरोमा नेपाली नागरिक तेन्जिङ शेर्पा र न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारी उक्लिए । विश्वमानव इतिहासमा पहिलो पटक त्यति अग्लो हिमाल आरोहण गर्ने दुईमध्ये एक नेपाली थिए, जसका कारण आज पनि विश्वमा नेपालको नाम त्यही कारणले बारम्बार लिने गरिन्छ । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका सिद्धार्थ गौतम तपस्या गर्दै गौतम बुद्ध भए । विश्वमा अहिंसाको सन्देश फैलाए । गौतम बुद्धले उतिबेला विश्वशान्तिका लागि अहिंसाको सन्देश नछरेका भए सायद मानव संख्या आज भएका जति नहुन पनि सक्थे । नमार, नकाट भन्ने उनको सन्देश विश्वभरि फैलिएर त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिँदा समेत आज विश्वमा मारकाट र अनेकअनेक खालका उत्पात् भइरहेका छन् भने उनले शान्ति सन्देश प्रवाह नगरेको भए संसार आज कस्तो हुन्थ्यो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बुद्धको नेपालमा भएको जन्म र उनको कर्मले तमाम नेपालीको इज्जत र गरिमा वृद्धि भयो । प्रकृतिले नेपाललाई संसारका मुलुकहरुमध्ये अद्भुत प्राकृतिक सुन्दरता दिइन् । संसारका अन्य मुलुकहरुमध्ये कुनै मुलुकको भागमा मरूभूमि मात्रै प¥यो, कसैको भागमा जंगल मात्रै प¥यो । कसैको देश पानीमाथिको देशको रुपमा चिनियो । तर, नेपाल सबै चीजले भरिपूर्ण देखियो । नेपाललाई जंगल प्राप्त छ । संसारका विरलै मुलुकमा पाइने एकसिंगे गैँडा र अनेकअनेक रुपरङका जनावर र चराचुरूङ्गीहरु यिनै जंगलमा उपलब्ध छन् । संसारका कुनाकाप्चाबाट विदेशीहरु तिनै जनावर र चराचुरूङ्गी हेर्न ठूलो रकम खर्च गरेर नेपाल आइरहेका छन् । नेपालको अकल्पनीय सुन्दरता देखेर दुनियाँ चकित परेर वाह ! नेपाल वाह ! भनिरहेका छन् । प्रयोग गर्न सकियो भने संसारकै धनी बन्न सकिने अवस्थाको पानी नेपालको भागमा परेको छ । पानी नभए मान्छे मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि प्राणी बाँच्न सक्दैन । तर, पेट्रोल नभए पनि मान्छे मर्दैन । असहज र अप्ठ्यारो हुने बेग्लै प्रसंग हो । गहिरिएर विचार गर्ने हो भने पेट्रोलभन्दा पानी महँगो हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रयोगको समुचित उपाय चाहिन्छ । मूल्य निर्धारण गर्ने र बोल्ने मान्छेले हो, पानी र पेट्रोल बोल्दैन । कसैले शुद्ध पेट्रोलको मूल्य रू. १३९ तोक्छ भने हामीले शुद्ध पानी लिटरको रू. १५० तोक्न सक्छौँ र बेच्न पनि सक्छौँ, त्यसका लागि बुद्धि चाहिन्छ । शुद्ध पिउने पानी नभएका मुलुकहरु जोसँग पेट्रोल छ, तिनलाई बोतलमा भरेर वा बरफको ढिक्काकै रुपमा पानी बेच्न सकिन्छ । पानीबाट पर्याप्त जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था पनि छँदै छ । यो कोणबाट व्याख्या गर्दा प्रकृतिको सहयोगका कारण पनि हाम्रो इज्जत अकाशिएको छ । यो नेपालीको सामूहिक इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय हो । अर्कोतर्फ, सामूहिक रुपको बेइज्जत पनि भइरहेकै छ ।
किन पुगे, कसरी पुगे, कसले पु¥यायो भन्दा पनि पुगिसकेको अवस्थाबारे चर्चा गरिन्छ । भारतको मुम्बई सहरको वेश्यालयमा हजारौँ नेपाली चेलीहरु वेश्यावृत्तिमा आज पनि संलग्न भएको भेटिन्छ । नेपाल धर्तीमा जन्मेर यही माटोका लागि काम गर्नुपर्ने चेलीहरु, शिक्षिका, डाक्टर, पाइलट, मन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म बनेर मुलुक हाँक्ने अधिकार प्राप्त ती चेलीहरु वेश्याका रुपमा अर्काको देशमा नारकीय जीवन बाँचिरहेको अवस्था तमाम नेपालीको सामूहिक बेइज्जती हो । गरिबी र बेरोजगारीका कारण मध्यम वर्गीय नेपाली जनताका छोराहरु साउदी अरेबिया, कतार, दुबई, मलेसियातिर गएका बखत विभिन्न कारणले मृत्यु हुन पुग्दा ती देशका मुर्दाघरका बाकसमा थन्किएर रहेका छन् । शवहरु नेपाल ल्याउन नसकेको अवस्था छ । यो अवस्था सबै नेपालीको इज्जत गुमेको अवस्था हो । विकसित कहलिएका राष्ट्रका नागरिकहरु कुनै अर्को देशमा जाँदा कुनै खालको कठिनाइ महसुस गर्छन् भने सम्बन्धित राष्ट्रको सरकार आफ्नो नागरिकको हितका लागि तुरून्तै सक्रिय हुन्छन् । तर, कोही कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गए, कोही छड्के बाटोबाट गए, जानचाहिँ खाडी मुलुक गए । अनेकअनेक कारणले विदेशी जेलमा बस्न बाध्य भए ।
आज पनि दुनियाँका जेलहरुमा हाम्रा नेपाली नागरिकहरु थुनिएका छन्, पिटिएका छन्, लुटिएका छन् र मारिएका पनि छन् । तर, नेपाल सरकार बेसरोकार भएर बसेको देखिन्छ । सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुँदा सरकारको यो लाचारीका कारण सम्पूर्ण नेपालीको बेइज्जत भएको छ । सुशील नेतृत्वको सरकारमा यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका लालबाबु पण्डितले करिब ११ सय निजामती कर्मचारीहरुले नेपालमा बहालवाला कर्मचारी रहेकै अवस्थामा विदेशी नागरिकता लिएर राष्ट्रलाई धोका दिएको बताएर कानुन संशोधन गरेर कार्बाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपाली कर्मचारीहरुको यो बेइमानी चरित्रले सबै नेपालीको इज्जतमाथि कालो पोतिदिएको छ । दुनियाँले थाहा पाए– भौतिक सुखसुविधाका लागि नेपाली कर्मचारीहरु मातृभूमिलाई समेत लात्तो हिर्काउन पछि पर्दैनन् । यिनको अवसरवादी चरित्रले नेपाली जनताको इज्जत गुमेको छ । केही थप उदाहरणहरु अझै छन् ।
छिमेकी राष्ट्र चीनमा आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नेलाई फाँसीको सजाय छ । जापानमा त्यस देशका नागरिक आज पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई महापाप सम्झिन्छन् । यस कारण, तिनको इज्जत छ विश्वभरि । हाम्रो सवालमा त्यो अवस्था देखिएन । अपवादलाई छाडेर सबका सब भ्रष्टाचारी भन्ने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचार नगरेर अब यो देशको इज्जत जोगिनेवाला छैन । कृषिमन्त्री हरि पराजुलीलगायत पनि इमानदार हुनुपर्छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र तिनका मातहत काम गर्ने केही अफिसरहरु इमानदार र काविल हुँदैमा विदेशीले नेपालका सबै प्रहरीलाई उत्तिकै इज्जत दिनेवाला छैनन् । दुनियाँले धनीको लाइनमा उभ्याइदिएका अरबपति विनोद चौधरी नेपाली हुँदा पनि नेपालको इज्जत बढ्न सकेन । कारण थिए– नेपालमा खानै नपाउने अवस्थाका राउटे, कुसुन्डा र चेपाङ भन्ने गरिएका गरिब नेपाली जनता । विनोद धनी हुँदा चेपाङको इज्जत बढेन, तर चेपाङले खान नपाउँदा विनोद चौधरीको बेइज्जत भएको छ । नेपाल सरकारको बेइज्जत भएको छ । देशभित्रका धनीहरुको बेइज्जत भएको छ । किनकि, इज्जत एउटा व्यक्तिमा सीमित नभई एकापसमा सिंगो देशसँग जोडिने हुुँदा कुनै व्यक्ति विशेषले मचाहिँ इज्जतदार हुँ नभन्दा नै कल्याण हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री सुशील, राष्ट्रपति डा. रामवरण, अरबपति विनोद र आधापेट खाने, आधा शरीर ढाक्ने चेपाड्ड र अन्य गरीब नेपालीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको वजन, हैसियत उस्तै हो, उत्तिकै हो ।